အဘယ်ကြောင့်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါ–ယောဟန်သည်ကနေကြောင်မြီးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်နိုင်စေဖို့သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေဖို့အဘယ်ကြောင့်ငါဒီယိုအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်အပေါ်များအတွက်ပြီးခဲ့သည့် ၃ နှစ်ချပ်၏အကျိုး! ကျနော်တို့မူလကစတင်ဣပြန်သြဂုတ်လတွင် ၂၀၁၅ ထိုနောက်နှစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှု၏၊ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့အချိန်ရရန်အလုပ်လုပ်အပေါ်တင်။ ဒါဟာအလွန်ကြီးသောအမှုကိုဣတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်သေ-ခဲယဉ်းပရိသတ်တွေ၊ဒါပေမယ့်ပြဿနာမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်း။ နေစဉ်ကျနော်တို့ကြိုးစားခဲ့ပြီး၊အပြာဂိမ်းကစားကွင်းကြီးနေဆဲတော်တော်အခြေတည်ပြီးကျွန်တော်မမြင်ဆိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြကြောင်းအမှန်တကယ်လူသတ်သမား။, ဒီအခါကြောင်မြီးဍာဖို့ဆုံးဖြတ်ယူကိစ္စရပ်များသို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လက်နှင့်ကောင်းစွာ၊ဒီနေရာမှာသင်ရှိသည်–အသီးအပွ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်! ဒါဟာလာမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်း၊ငါတို့မူကားအမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းငါတို့သည်ယခုရှိသည်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုတြန္း-မှုတ်သွင်း XXX ဂိမ်းများလိမ့်မယ်အစဉ်အမြဲကစားသည်။ လာငရဲသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအရေ၊ကျွန်တော်သေချာသင်ပေးထားသောအပူဆုံးညစ်ညမ်းဆက်စပ်ဂိမ္းအစည်းလူသိများလူဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ငွေပြန်လည်! အိုး၊ပြောရမယ်ပိုက်ဆံ၏:ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာဖော်ပြထားမီသွားမည်သည့်ပိုမိုသောအချပ်များ၏အကျိုးကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့အဘို့ကစားရန်။, မှန်–တက်လက်မှတ်ထိုးရဂိမ်းကစားခြင်းမရှိဘဲလွှဲပြောင်းခြင်းအပြား! တော်တော်ချိုမြိန်၊အယ်?
ကျွန်တော်သိသည်စတင်လာတဲ့အခါဒီဂိမ်းအကြောင်းအနုပညာအဖြစ်နှစ်ပေါင်း၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကျနော်တို့ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ်မှတ်ကဖန်တီးခြင်း၏ထိုကဲ့သို့သောအမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နှင့်အတူဂိမ်းအလွန်ကြီးစွာသောအနုပညာလက်မှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနုပညာရှင်များ၏သိသောတိရစ္ဆာန်ဗေဒထက်သာ။ ကျနော်တို့ပြည်နယ်စံချိန်တင်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုးအနည်းငယ်ပိုပါတယ်'လူ'နှင့်လက်တွေ့ကျကျ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သို့တိုင်ယုံကြည် weebs ထွက်ရှိချစ်သွားရတဲ့သူတို့ရဲ့အရည်စီးဆင်းကျော် sprites နှင့် NPCs သူတို့ဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်။ ပတ်ပတ်လည် ၅၀%ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်သို့သွားလေ၏အနုပညာလက်ရာများအဘို့အတယောက်တည်းသာအချပ်များ၏အကျိုး၊ဒါကြောင့်သင်ပိုကောင်းသွေးကောင်းကောင်းနှစ်သက်!, ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ရေမတွက်နိုင်သောနာရီအလိုးအမှန်တကယ်လက်သည်းအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကြိုက်မနှစ်သက်ကြောင်းဤအမျိုးအစား။ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ဒီအချက်တွေအားလုံးဟာသုတေသနလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နှင့်အခြား! ထို့အပြင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကြီးစွာသောအနုပညာလက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အားဖြင့်ပြန်ဂိမ်းအင်ဂျင်က၊ငါတို့သည်လည်းအရေအတွက်ရှိကတ်များနှင့်မြင်ကွင်းများဖို့သော့ဖွင့်နှင့်အတူအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအတောက်နှင့်ဒီဇိုင်း။ လုံလောက်ကြောင်းပြောဖို့ကျနော်တို့ဒီအချက်ဟာအရမ်းကြီး၏လမ်းအလယ်ခေတ်အဖြစ်အပျက်ညမ်းရှာပုံတော်ဂိမ်း။ သင်ကကစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ? ကျနော်တို့သေချာဒါကြောင့်မျှော်လင့်!
နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့အချက်တစ်ချက်သို့သွားလေ၏သောငါတို့၏ဒီဇိုင်းနှင့်အဆင္အျချဉ်းကပ်ခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်ဣတစ်ဦးအားကြီးသောသဘောမျိုး၏စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုနှင့်။ ကတည်းကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချင်တယ်လူဂိမ်းကစားရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ၊အရေးရှိသည်ဖို့နိုင်စွမ်းအမှန်တကယ်ရရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအပေါ်ချုပ်ကိုင်ထားအရာကိုရဲ့ဖြစ်ပျက်နိုင်စေဖို့အသိပေးတဲ့ရွေးချယ်မှုအောင်။ ရှိပါတယ်လေးပင်ပင်ဒေသများ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဇာတ်ကောင်အမည်မျက်နှာသို့ဆွဲထုတ်လုပ်အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံး၊အသီးအသီးနဲ့နောက်ထပ်သြဇာလွှမ်းမိုးသင့်ရွေးချယ်မှုချအလမ္း။, ဥပမာအားဖြင့်၊သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အကြီးအကျယ်ငအ၊မမျှော်လင့်အတွက်ဖုန်းဆက်ဖို့မျက်နှာသာသို့မဟုတ်နှစ်တဝက်-လမ်းအားဖြင့်။ အမှာက်ရှာလျှင်အစေခံရန်၊အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်အနည်းငယ် NPCs များမှာလမ်းလျှောက်သွားဖြောင့်ကျော်သင်နှင့်သင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်မှသူတို့ကိုရပ်တန့်။ မှတဆင့်တိုးတက်မှုအဖြစ်တစ်နည်းနည်းကိုစွ၊သင်တို့သည်လည်းရှိ၏နံပါတ်ရိုက်သောသင်ပွင့်ကောက်လို့ရပါတယ်သြဇာလွှမ်းမိုးရန်အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်မနည်းပါဘူး။, ဤသည်အဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစနစ်၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူများစွာ၏ရွေးချယ်မှုများ၊သင်လိုပါလိမ့်မယ်ကောက်နှင့်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုချမှတ်ဖို့သူတို့ကိုသင့်ရဲ့တိကျတဲ့ကစားအားဖြင့်ချဉ်းကပ်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုကိစ္စကဒီမှာ၊ဒါကြောင့်သေချာအောင်သင်ပေးဆောင်အာရုံစိုက်!
တဦးတည်း၏အရေးအပါဆုံးအမှုအရာသည်ငါတို့အဘို့ကြီးသောသေချာအောင်လှီးခြင်း၏အကျိုးကစားနိုင်ပါတယ်အသုံးပြုရုံမျှလက်(ဤအသိသာအကြောင်းရင်းများကြောင့်၊လက်ျာ?)။ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊ဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ကြောင်း porting မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှအမှန်တကယ်အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး၊အထူးသဖြင့်ကတည်းကသင်ဂိမ်းကစားသည့်အဖြောင့်အားဖြင့်။ ချပ်များ၏အကျိုးအတူသင်တို့ပေးသွားမှာပါတူသောပုံများနှင့်ပိုင့်အဘယျသို့၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံး၏ကယ်တင်ထပ်မှဆာဗာများ၊သင့်ရဲ့ဂိမ်းသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထုတ်ဝေသောလွန်း! မှတ်ချက်ဒါကကျနော်တို့လက်ရှိတွင်အပြည့်အဝထောက်ခံမှု Chrome၊မြေခွေး၊ေပ၊အော်နှင့်အစွန်း။, နေစဉ်အခြားသောဘရောက်ဆာများစေခြင်းငှါ၊အလုပ်ရုံဒဏ်ငွေ၊ဤသူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်ကိုအာမခံဘို့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့လည်းစီစဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ညာဂ်ာဗားရှင်း၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအတွက်လွန်းမဝေးအနာဂတ်–ရီဒီအာကာသ!
ခံစားချင်၏အဓိပ္ပာယ်အောင်မြင်? ကျနော်တို့ကြားရတယ်။ ေဖါ ၁။၂၊ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြောသည် ၃၃၈ ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုများ၊အားလုံးအရာ၏ထုံးစံအနုပညာလက်ရာများအကြောင်းသင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သော့ဖွင့်၊အဖြစ်အများအပြားအပိုဆောင်းဆုကြေးငွေအဖြစ်ထူးခြားတဲ့ဖှေ၊တည်နေရာနှင့် NPCs အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့။ မှတဆင့်တိုးတက်မှုအဖြစ်တစ်နည်းနည်းကိုစွ၊သင်လိုပါလိမ့်မယ်မှန်မှန်ထွက်စစ်ဆေးအအောင်မြင်မှုဧရိယာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းကြည့်ဖို့လုပ်နေ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားပြီးလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အင်္ဂါမှအောင်မြင်မှုများနောက်ပိုင်းတွင်လမ်းဆင်း၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ပျော်နှင့်အတူအနည်းအမှုအရာများမှာယခုများအတွက်။, ကနဦးအနေဖြင့်တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်ပရိသတ်များနှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကဖိုရမ်များနှင့်ဖက်ဆာဗာခဲ့ရာတွင်အပြုသဘော:အခုကလူကိုတကယ်ပျော်မွေ့ချပ်၏အကျိုးနှင့်အဘယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့အကျင့်ကိုကျင့်စေရန်အကောင်းဆုံး XXX ဂိမ်း။ ကိုယ့်မူရင်းကဲ့သို့၊ကျနော်တို့ကတုံ့ပြန်ချက်မှဂိမ်းကစားဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဟာသူတို့ကိုအတွေ့အကြုံချင်တယ်:အဘယ်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းများ။ ပါကကိုယ့်အကြိုက်သင့်ကယ်တင်တိုးတက်မှု၊အောင်မြင်မှုများဖြစ်ကြောင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတစ်ဝှမ်းလုံးထုတ်ကုန်များနှင့်ကယ်တင်:ရုံသေချာအောင်သင်နာက္လည္းဘာတူညီသောအကောင့်နဲ့သင်သှားဖို့ကောင်းနေ!